पहिलो चरणमा ६५ हजार उत्पादन गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । डिस मिडिया नेटवर्क प्रालिअन्तर्गतको डिजिटल होम इन्टरनेशनलले नेपालमै पहिलोपटक सेट–टप बक्स उत्पादन शुरू गरेको छ । सरकारले एनालग टेलिभिजन हटाएर २०७५ वैशाख १ देखि डिजिटलमा रूपान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा सेटअप बक्सको अत्यधिक खपत बढेको भन्दै कम्पनीले नेपालमै ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्ने भएको हो ।
कम्पनीका अनुसार अबको एक महीनाभित्र परीक्षणका रूपमा ६५ हजार ओटा सेट–टप बक्स उत्पादन गरिनेछ । डिजिटल होम इन्टरनेशनलका कार्यकारी अधिकृत केशव पौडेलले सेट–टप बक्स उत्पादन गर्न शुरूआती चरणमा रू. ४० करोड लगानी गरे पनि केही समयभित्र रू. १ अर्ब लगानी गर्ने योजना रहेको बताए ।
उनका अनुसार सेट–टप बक्स लगायतका प्राविधिक वस्तु एसेम्बल उत्पादन गर्न कम्पनीले छुट्टै डिजिटल होम इन्टरनेशनल नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ । पहिलो चरणमा उत्पादन हुने सेट–टप बक्सका लागि सूचना तथा प्रसारण विभागबाट स्वीकृति लिइसकेको र बढी मात्रामा उत्पादन गर्न अझै प्रक्रियामा रहेको पौडेलको भनाइ छ ।
कम्पनीले सेट–टप बक्स उत्पादनका लागि चीनबाट सामान आयात गरिरहेको छ । कम्पनीका अनुसार सेट–टप बक्स उत्पादन गर्न गोदावरीमा भवन निर्माण गरिसकिएको छ । गत साउनदेखि नै सेटअप बक्सको निर्माण शुरू गर्ने भनिए पनि प्राविधिक समस्याले काम पछाडि धकेलिएको कम्पनीले बताएको छ ।
सेट–टप बक्स उत्पादनको प्रविधि बाहिरकै भए पनि सामग्रीको डिजाइन नेपालमै हुनेछ । कार्यकारी अधिकृत पौडेलका अनुसार वार्षिक १० लाख युनिट सेट–टप बक्स उत्पादन गर्ने तयारी छ ।
नेपालमा कुल ८० लाख सेट–टप बक्सको माग छ । हाल नेपालमा ३० देखि ३५ लाख ग्राहकमा डिजिटल टेलिभिजनको पहुँच पुगिसकेको छ । डिजिटल टेलिभिजन पुग्नुपर्ने सबै स्थानमा सेट–टप बक्सको माग परिपूर्ति गर्न कम्पनीले उत्पादन थालेको हो । कम्पनीले उत्पादन, वितरण र रोजगारी पनि दिने भएकाले सेट–टप बक्स उत्पादन सबै दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण हुने कम्पनीको भनाइ छ ।
डिसहोमका कार्यकारी निर्देशक सुदीप आचार्यले सेट–टप बक्स उत्पादनको लागि पूँजी वृद्धि गर्दै उत्पादन क्षमता र उत्पादनको मात्रा पनि बढाउने जानकारी दिए । उनका अनुसार एसेम्बलका लागि दुई जना विदेशी साझेदार र पाँच जनाको सहकार्य छ ।
नेपालमा सेट–टप बक्स आयातको आँकडा सूचना विभागसँग भए पनि सार्वजनिक गर्न नमिल्ने बताइएको छ । कम्पनीले सेट–टप बक्सको उत्पादन गरेपछि यसको आयात घट्ने दाबी गरेको छ । यो उद्योग नेपालमै पहिलोपटक शुरू भएको हो । यसभन्दा अघि अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीले अन्य मुलुकबाटै आयात गर्ने गरेका छन् ।
अहिले नेपालमा सेट–टप बक्स शतप्रतिशत विदेशबाट आयात भइरहेको छ । विशेषगरी नेपालमा विभिन्न डिजिटल टेलिभिजन सेवाप्रदायकले वार्षिक ६ लाख सेट–टप बक्स आयात गर्ने गरेका छन् । नेपालमा भारत र कोरियाबाट सेट–टप बक्स आयात हुँदै आएको छ ।